कर्णालीका तीन जना मन्त्री सोमबारबाट स्वतः पदमुक्त हुँदै, को बन्दैछ नयाँ मन्त्री ? - Paschimnepal.com
कर्णालीका तीन जना मन्त्री सोमबारबाट स्वतः पदमुक्त हुँदै, को बन्दैछ नयाँ मन्त्री ?
कर्णाली प्रदेशका तीन जना मन्त्री सोमबारबाट स्वतः पदमुक्त हुने भएका छन् ।मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाको पदावधि भोलिबाट समाप्त हुने भएको हो ।
प्रदेशसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति बढीमा ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । फ्लोर गरेका माधव नेपाल पक्षका तीन जना सांसदलाई नेकपा एमालेले पदमुक्त गरेको थियो । हाल उनीहरु नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा रहेका छन् ।
मन्त्री थापा नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि छन् । उनीहरु भोलीबाट स्वतः पदमुक्त भएपछि नयाँ मन्त्री पठाउनेबारे नेकपा एसमा छलफल जारी रहेको मन्त्र बुढाले जानकारी दिए ।
उनले कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागि नसकेको बताए । कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ जनामात्रै सांसद रहेका छन् ।
नेकपा एसबाट चन्द्रबहादुर शाही, देवी ओली र पदमबहादुर रोकाया सांसद रहेका छन् । उनीहरुलाई नै मन्त्री बनाउने तयारी भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
गत वैशाख ३ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ‘फ्लोर क्रस’ गरेर विश्वासको मत दिएपछि थापा, शाही र बुढालाई सरकारमा सहभागी गराइएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । कांग्रेसले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको हो । तर, माओवादीले कांग्रेसको उक्त प्रस्तावमाथि असन्तुष्टी जनाउँदै आएको छ ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, कार्तिक १४, २०७८ 6:57:03 PM
Prevमौरी घार बिक्रीबाट वार्षिक १८ लाख आम्दानी
Nextपछिल्लो २४ घण्टामा थपिए ४०८ संक्रमित